FBS CopyTrade ​ဆော့ဖ်​ဝဲလ်​
အခမဲ့ - ဆော့ဖ်ဝဲလ် စတိုးတွင် FREE - In Google Play
အကျွမ်းကျင်ဆုံး အရောင်းအဝယ်သမားများထံမှ ကူးယူပြီး အမြတ်ကြီးကြီးရှာလိုက်ပါ။
FBS CopyTrade - ရွေးချယ်ထားသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ ဗျူဟာများကိုလိုက်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းကို ဦးဆောင်နေသော ရောင်းဝယ်သူများထံမှ အလိုအလျောက်ကူးယူကာ အမြတ်အစွန်းကြီးကြီးမားမားရစေနိုင်မည့် အများသုံးအရောင်းအဝယ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြင့် စမတ်ကျသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ အဖွဲ့ချုပ်သို့ ပူးပေါင်းလိုက်ပါ။ သူတို့အမြတ်များရတဲ့အခါ၊ သင်လည်းအမြတ်များရမှာပါ!
အဲ့ဒီနောက်တော့ သင်သည် အရောင်းအဝယ်သမားတစ်ဦး ဖြစ်လာနိုင်ပြီး၊ ကော်မရှင်ရာခိုင်နှုန်းအတွက် အခြားသူများကို သင့်အော်ဒါများ ကူးယူခွင့်ပြုနိုင်ပါပြီ။ သင့်ကျွမ်းကျင်မှုကို လူအများထံ မျှဝေပြီး၊ အခကြေးငွေ ရယူပါ!
FBS CopyTradeသည် သင့်ကို ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်နှင့် အလွယ်တကူမိတ်ဆက်ပေးပြီး၊ သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို အကျိုးရှိစွာ စီမံကိုင်တွယ်နိုင်ရန် ကူညီပေးပါတယ်:
အတော်ဆုံး အရောင်းအဝယ်သမားများထံမှ ကူးယူပြီး၊ ပညာရှင်တစ်ဦးလိုငွေရှာလိုက်ပါ
အကောင်းဆုံးကစားသမားများရဲ့ဈေးကွက်မှာ တိုးတက်မှုကိုလိုက်ပြီး ရောင်းဝယ်ခြင်းကို လေ့လာပါ။
အသေးစိတ် အရောင်းအဝယ်သမား အချက်အလက်များ ရယူပါ။
ထိပ်တန်းအရောင်းအဝယ်သမားများ စာရင်းကို အင်တာနက်တွင်ရှာဖွေဖတ်ရှုပြီး၊ သူတို့၏အမြတ်စာရင်းကို စစ်ဆေးကာ အအောင်မြင်ဆုံးတစ်ယောက်ကို ကူးယူရန် ရွေးထုတ်ပါ။
ထူးခြားတဲ့ အစုကို ဖန်တီးပါ။
အကောင်းဆုံး အရောင်းအဝယ်သမားများ၏ သင့်ကိုယ်ပိုင်အစုကို ဖန်တီးပါ။ သူတို့အောင်မြင်မှုကိုခြေရာခံကာ၊ သူတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ပိုက်ဆံရှာပါ။
အရောင်းအဝယ်သမားများ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နေချိန်မှာ လှုပ်ရှားမှုယူကာ သင့်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး သင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြင်ပါ။
ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတာ ဒီလောက်မလွယ်ကူခဲ့ဖူးဘူး! အကြောင်းအရင်းကတော့:
ဈေးကွက်ကိုဝင်ရောက်ပါ တိကျသေချာတဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဗဟုသုတမရှိဘဲ
တည်ငြိမ်တဲ့ဝင်ငွေတည်ဆောက်ပါ သက်သာစွာဖြင့် - အခြားလူများအလုပ်လုပ်နေစဉ် အေးအေးလူလူနေပါ!
ငွေအသွင်း/ အထုတ်လုပ်ပါ ငွေပေးချေစနစ် ၁၀၀ ကျော်မှတဆင့်
သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ အမြတ်အစွန်းအားလုံးကို ထိန်းချုပ်ပါ
လိုအပ်ချိန်တိုင်း သင့်အရင်းအနှီး ပမာဏကို တိုးမြှင့်ပါ
CopyTrade ဆိုသည်မှာ လူမှုကုန်သွယ်ခြင်း တော်လှန်ရေးဖြစ်သည်!
ဈေးကွက်မှာ မရေရာခြင်းနှင့် စိတ်မချရခြင်းများမရှိတော့ပါ - အခုဆိုရင် ကြီးမားတဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့အစည်းက သင့်ဘေးမှာ ၂၄/၇ ရှိနေပါပြီ! အခြားအရောင်းအဝယ်သမားများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး၊ အရောင်းအဝယ်ဗျူဟာများဆွေးနွေးကာ သူတို့၏ အရောင်းအဝယ်အစု(portfolio) လုပ်ဆောင်ချက်များကို သင်အကျိုးရှိအောင်အသုံးပြုပါ။ ခုပဲစတင်ပါ။ ရွေးချယ်ထားတဲ့ ပညာရှင်များ သင့်အတွက်အလုပ်လုပ်ပါစေ!
ပုံတူကူးရန်​ ထိပ်​တန်းအ​ရောင်းအဝယ်​သမား ၅ဦး
iOS အတွက် ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ
Android အတွက် ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ